arụzi: Oge ọ bụla a player nsị a kacha nta ịkụ nzọ ngụkọta ego nke £ 10 (ma ọ bụ ndị ọzọ ego Ẹkot) across Aloha! Cluster Pays™ he/she will receive 1* ntinye tiketi na-agbata n'ọsọ Olee. * Otu player nwere ike inwe a kacha nke 50 na-agbata n'ọsọ Olee tiketi kwa ụbọchị.
na-eru eru Game: Aloha! Cluster Pays™.
Mmeri ga-ahọrọ si gafee netwọk site a random na-agbata n'ọsọ Olee.
The na-agbata n'ọsọ Olee ga na-rụrụ otu ugboro. Ọ bụrụ na ndị na-emeri player enweghị ike ịkpọtụrụ ọma (n'agbanyeghị gị n'ụlọnga ma ọ bụ na-ahụ maka ọrụ mgbalị), the prize awarded may be declared void at NetEnt’s discretion, ntarama ka nke na-agbata n'ọsọ, agaghi-ekenyela ọ bụla ọzọ soò. Nke a ga-eme ga na-agbata n'ọsọ Olee ibu adabaghi ​​site ọrụ nke ileghara ndị dị otú ahụ dị ka ikwe Player si nanị n'ókèala isonye ma ọ bụ egwuregwu si ọrụ bibiri ndị na-abụghị họọrọ na ụdị nke ọrụ(s) na-gụnyere ke Olee.
The Nrite Isiokwu:
4nke – £212.5
5nke-501st – £12.75
The cash prizes are worth £8500 and will be shared amongst 500 na-emeri egwuregwu.
Ọ bụla na-akwụ ụgwọ ndị metụtara ụtụ isi ga-player kwesịrị ime.
Ego nwa anụmanụ nwere ike ghara inwe wagering chọrọ. Player ga-enwe ike ịdọrọ nwa anụmanụ ozugbo ga na ha chọrọ ime otú ahụ.
Iji gbakọọ kacha nta wagering chọrọ bụrụ na nke na-abụghị EUR ego, NetEnt ga-eji nke kacha nta nzọ nke na-eru eru egwuregwu n'agbanyeghị ego na ya akakabarede ọnụego n'etiti abalị na njedebe nke ụbọchị mbụ nke Akon, dị otú ahụ na akakabarede ọnụego a na-ekpebisi ike site bi data nkwakọba.
NetEnt will refund the cash prizes according to the EUR values mentioned above, ma tọghatara (eji kwa ọnwa nkezi udu) n'ime invoicing ego ejikari.